Madaxweyne kuxigeenka Kenya william ruto oo baaq Ujeediyay qawmiyada Kamaba. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Madaxweyne kuxigeenka Kenya william ruto oo baaq Ujeediyay qawmiyada Kamaba.
Madaxweyne kuxigeenka dalka kenya mr william ruto ayaa ugu baaqay qawmiyada kamba inaysan dooranin doorashada soo socota siyaasiyiin aan waxba uqabaneeynin.
xiliga uu hadalkasi jeedinaayay madaxweyne kuxigeenka kenya mr william ruto ayaa waxaa garab taagnaa qaar kamid ah xildhibaanada aqalka barlamaanka dalka kenya.
qaar kamid ah siyaasiyiinta qawmiyada kamba ayaa ugu baaqay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wiper kalonzo musyoka inuu kusoo biiro xisbiga jubilee ee dalka maamula hada.
hadalka madaxweyne kuxigeenka kenya mr willaim ruto ayaa kusoo beegmaaya xili dalka uu isu diyaarinaayo doorashada guud ee sanadka soo socda ee 2017.